Ahoana no nidiran'i Orabrush tany Walmart | Martech Zone
Ahoana no nidiran'i Orabrush tany Walmart
Talata, Septambra 20, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tao anatin'ny roa taona, ny dokotera Bob's Orabrush dia nanomboka tamin'ny fivarotana garazy ka hatramin'ny fivarotana tanindrazana isaky ny Walmart nanerana ny firenena. 2 tapitrisa mahery ny mpanadio ny lelany no amidy nefa tsy amidy misy doka nentim-paharazana.
Ny lakilen'ny tetikadin'izy ireo dia ny fampielezan-kevitra momba ny varotra mahery setra izay nanambatra ny lafiny rehetra mahomby indrindra amin'ny marketing viral sy lasibatra. Orabrush dia lasa fahatsapana Youtube, miaraka aminy Manasitrana fofonaina ratsy fantsona ahazoana mpijery maherin'ny 38 tapitrisa sy mpanjifa 160,000, ka mahatonga azy io ho fantsona mpanohana be mpidina indrindra, ao aorinan'ny Old Spice sy Apple ihany. Raha ny fahafantarantsika azy dia io no vokatra voalohany tokony hivoahana avy amin'ny tsy misy hatramin'ny fizarana iray manontolo amin'ny Youtube.
Ity misy fihenan'ny tetikady marketing tsy mampino:
Singa iray manan-tsaina amin'ny paikady ankapobeny ny kendrena ireo mpiasan'ny Walmart ao amin'ny Facebook miaraka amina fampielezan-kevitra hanao Orabrush ao amin'ny magazay. Orabrush dia amidy eo amin'ny sehatra nasionaly ankehitriny, ary nanao izany izy ireo nefa tsy voatery nitsidika sy nametraka mivantana ny vokatra niaraka tamin'ny orinasa akory!
Fanavaozana: Aza hadino ny mihaino ilay tafatafa nifanaovanay tamin'i Jeffrey sy Austin!
Ahoana ny fampiasana smartphone?
20 Septambra 2011 à 4:48
Ny tantara rags to riches, tena mahafinaritra. Amin'izao fotoana izao dia hitondra ny vokatra Orabrush i Walmart, ny mpiasan'ny Walmart izay mety hanazava ny hatsaran'ny vokatra dia mety tsy maintsy manova ny feon'izy ireo. Tsy voatery manao antso amin'ny antsipiriany mifandraika amin'ny mpiasan'ny mpivarotra mitondra vokatra ny Torolàlana Fankatoavana FTC nohavaozina, fa anisan'ny zava-misy vaovao amin'ny fampiasana fantsona sosialy ho an'ny fankatoavana izany.